Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l0712 tal
Ny fiomanana sy ny ampingan'ny finoana
Talata 13 Nov.
Nitafy ny akanjo fiadiany ny miaramila rômanina mba tsy ho tafintohina raha sendra lalana mikitoantoana. Mba hanamora ny fivezivezeny eny amin’ny karazan-dalana rehetra àry, dia mazàna ny kiraro nanaovan’izy ireo no nofenoina fantsika maranitra avy any ambany. Nifahatra tsara teo amin’izay nisy azy ny olona nitondra io kiraro io ka izany no antony nampitahan’i Paoly azy tamin’ny “fahavononam-panahy” na “fiomanana” avy amin’ny filazantsaran’ny fihavanana (Efes. 6:15).
Vakio ny Isa. 52:7; Rôm. 10:15, ary ny Efes. 6:15. Ny fijoroana tsara eo amin’ny fiainana kristianina misy ady no toa tian’i Paoly horesahina. Amin’ny heviny manao ahoana no anomezan’ny filazantsaran’ny fihavanana “fifaharana tsara” ho an’ny Kristianina eo amin’ny ady ara-panahy atrehiny?
Mety ho azo adika amin’ny fomba hafa tahaka izao ny Efes. 6:15: “mikiraro ny fiomanana avy amin’ny filazantsaran’ny fihavanana”, “mikiraro ny fahavononam-panahy avy amin’ny filazantsaran’ny fihavanana,” na “mikiraro ny fitaovana avy amin’ny filazantsaran’ny fihavanana”. Teny grika iray izay midika hoe “fahavononana” no teny fototra ao, toy ny amin’ireny fototra efa voaomana tsara ireny. Noho izany, ny filazantsaran’ny fihavanana amin’ny maha-“fototra voaomana” azy no fihavanana andraman’ny Kristianina vokatry ny fampihavanana azy tamin’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny ran’i Kristy. Io fampihavanana io no mampifahatra tsara ny Kristianina eo anatrehan’ny tolona ara-panahy atrehintsika rehetra.
Ny ampahany manaraka indray amin’ny akanjo vy fiarovan-tena resahin’i Paoly dia ny ampinga izay anoharany ny finoana (Efes. 6:16). Rehefa nampiditra ny amin’io fiadiana io ny apôstôly, dia natombony tamin’ny hoe “ho fanampin’izany rehetra izany,” na “ankoatra izany rehetra izany” ny heviny. Inona no tian’ny apôstôly holazaina tamin’io fiantombohan’ny teniny io araka ny hevitrao?
Ny teny nandikana ny hoe “ampinga” dia avy amin’ny teny nentina nilaza ny “varavarana”. Nirefy teo amin’ny 1, 219 m teo ho eo ny lavan’ny ampinga ary 0, 76 m ny sakany, ary takelaka hazo anankiroa naraikitra no nanamboarana azy sady natao ho toy ny varavarana ny endriny. Koa satria ny zana-tsipìka tamin’izany andro izany dia natsoboka tanaty faikan-tsolitany sady narehitra, dia nofonosina hoditra ny ivelan’ny ampinga mba hamono ny afon’ny zana-tsipìka miredareda sady hanadombo ny lohany. Fitaovam-piadiana manana ny maha-izy azy indrindra io amin’ny fitaovana fiarovan-tena rehetra.
Tsy sarotra ny mahita ny fampitahana ara-panahy atao eto. Anisan’ireo “zana-tsipìka mirehitra afo” alefan’i Satana ny fitsiriritana, ny tsy finoana, ny tsy fahalalana onona, ny avonavona, sy ny sisa. “Ny finoana an’Andriamanitra kosa, izay aroso eo aloha ho toy ny ampinga no mifanehatra amin’izany, mamono ny lelafo ka manjera azy ireo amin’ny tany.” — SDABC, b. 6, t. 1045. Voalohany indrindra io karazam-pinoana io, dia ny finoana arahina asa. Tafiditra ao anatiny ny fahamarinana ara-poto-pampianarana kanefa tsy mianina fotsiny eo izany karazam-pinoana izany. Finoana miseho eo amin’ny fanoherana amin’ny fomba mahery vaika ny famelezan’ny fahavalo izany. Mazava loatra fa tsy vitantsika ny mamonjy ny tenantsika ary tsy vitantsika samirery ny hiady amin’ny devoly. Ny tolona ataontsika kosa anefa, dia ny misafidy isan’andro ny hiankina amin’ny Tompo sy ireo fiadiana atolony ho fanoherana ny zavatra rehetra alefan’ny devoly eo anoloantsika.